Home » Lahatsoratra farany farany » Ahoana ny fomba hahazoana ny diplaomanao ho Nomad Digital
Ny fitetezana an'izao tontolo izao, ny fiasana amin'ny solosainao finday, ary ny fahazoana ny mari-pahaizana dia azo atao kely lavitra noho izay eritreretinao.
Niteraka nofinofy tao am-pon'ny olona an-tapitrisany ny kolontsaina mpifindrafindra nomerika mba hanafoana ny satan'ny olona sy hanamboatra ny lalan'izy ireo manokana amin'ny fiainana.
Angamba ianao te hampianatra anglisy amin'ny sinoa na bask ambanin'ny masoandro any Bali.
Na aiza na aiza no tianao haleha, dia tsy mila misafidy ianao na hivezivezy na hanangana asa. Raha ny marina, izy roa dia afaka miara-miaina miaraka mirindra ary manampy anao hahatratra ny fomba fiainanao mora kokoa.
Raha liana te hianatra ianao ahoana no fomba hahatongavana mpifindrafindra nomerika raha mbola any am-pianarana dia vakio hatrany.
Misafidiana diplaoma manana fotoana mety amin'ny asa lavitra
Raha te ho tonga mpifindrafindra monina nomerika ianao dia mila misafidy lehibe iray izay hanome anao fahafaha-mivelatra asa. Raha tokony haka saha hampifandray anao amin'ny asan'ny birao ianao mandritra ny 40 taona ho avy, dia diniho ireo indostria miorina amin'ny nomerika. Azonao atao ny miditra amin'ny fandaharana, famolavolana tranonkala, marketing nomerika na fanoratana. Azonao atao aza ny mahazo ny diplaomanao amin'ny fanabeazana mba hanamafisana ny fahazoanao mampianatra teny anglisy any ivelany.
Betsaka ny programa amin'ny Internet azo ovaina izay hanampy anao hijanona any an-tsekoly mandritra ny dia ataonao. Azonao atao ny mangataka a fampindramam-bola ho an'ny mpianatra tsy miankina hahazoana famatsiam-bola ho an'ny saram-pianarana sy fandaniana hafa. Ny ampahany tsara indrindra amin'ny fampindramam-bola tsy miankina dia ny fanananao fahalalahana bebe kokoa amin'ny fandanianao ny vola indramina. Misy ihany koa ny fotoana fandaminana fandoavam-bola bebe kokoa izay azonao araraotina aorian'ny diplaomanao.
Tsy maintsy mitazona ny tongotrao amin'ny tany ianao satria manidina ny nofinofisinao momba ny fiainana any ivelany. Mety ho sarotra ny fiainana any ampitan-dranomasina, ary maro ny olana isan'andro tsy maintsy resinao amin'ny maha-vahiny anao. Manomboka amin'ny sakana amin'ny fiteny ka hatramin'ny tahan'ny fiovam-po, misy zavatra maro tsy maintsy haloanao an-trano noho ny asa sy ny sekoly. Tsy maintsy mameno ny takiana visa amin'ny toerana halehanao koa ianao. Ny fomba mora indrindra hidirana amin'ny ankamaroan'ny firenena dia amin'ny visa na mpianatra. Izany dia mety amin'ny alalàn'ny fampianarana anglisy, maha-mpivady au na misoratra anarana amin'ny lesona amin'ny sekoly fiteny iray rehefa mahazo ny fianaranao amin'ny oniversite amin'ny Internet ianao.
Mety te hivezivezy malalaka ianao ary hiaina amin'izay toerana itiavan'ny fiainana anao, saingy izany dia mitondra anao any lavitra any. Afaka manana fahalalahana bebe kokoa ianao amin'ny maha mpifindrafindra nomerika anao, saingy mbola mila manana tanjona voafaritra tsara ianao amin'ny hoavinao. Ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra dia satria rehefa manomboka mihalefaka ny fiainganana voalohany dia ho hitanao fa marary an-trano ianao na mahatsiaro ho tsy misy dikany. Raha tsy fantatrao izay tianao haleha dia mety ho sarotra ny miantoka antoka ara-bola.
Tapitra ny visa, ary misy olona te honina amin'ny firenena maro dia tsy maintsy mandany fotoana any amin'ny tanindrazany eo anelanelan'ny visa. Aiza ianao no hipetraka mandritra ny fotoana fohy? Inona no hataonao rehefa te hametraka faka ianao? Fantatrao ve ny fomba hiarovana ny tranonao eo am-pandehanana? Ny tanjonao farany ve dia ny hahazoanao zom-pirenena any an-tany hafa na hody any an-trano dieny izao eo anelanelan'ny dia? Araka ny hitanao, ity dia mitaky fandaminana feno eritreritra na aiza na aiza alehanao na izay ianaranao.